आजबाट 'बिग बोस' सुरु हुँदै, को-को सहभागी हुँदैछन् ? (नामसहित)
एजेन्सी, १२ असोज । निकै चर्चित तर विवादित रियालिटी शो ‘बिग बोस’ को १३ औं श्रृङ्खला आजबाट सुरु हुँदैछ ।
कलर्स टिभीले आज राति ९ बजे ‘बिग बोश’ को पहिलो भाग प्रसारित गर्दै छ । यस पटकको सिजनमा सलमान खानले भारतका चर्चित १३ जना सेलिब्रिटीसँगै शो सञ्चालन गर्दैछन् । ‘बिग बोस’ मा यसपटक प्रतिस्पर्धा गर्ने १३ जनाको नाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस पटक ‘बिग बोस’का को-को सहभागी हुँदैछन् ?
यसपटक खानले विभिन्न क्षेत्रका चर्चित अनुहारसँग रोमाञ्जचक खेल खेल्न गइरहेका छन् । यसपटक स्टार प्लसको शो साथ निभाना साथियामा गोपी बहूको भूमिका निभाएकी देवोलिनी भट्टचार्य सहभागी हुँदैछन् । त्यस्तै नायिका आरती सिंह र नागिनकी माहिरा शर्माले समेत प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
साथै कोयना मित्रा, भोजपुरी नायिका रश्मी देसाई, टिभि कलाकार पारस छावडा, चर्चित पत्रकार शेफाली बग्गा, टिभी कलाकार दलजीत कौर, असीम रियाज, गायिका शहनाज कौर गिल, टिभी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला, संगीतकार अबु मलिक र लेखक सिद्धार्थ रेलाई समेत ‘बिग बोस’ मा देख्न पाइने छ ।